Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar ayaa markii ugu horeysay taariikhda dalka Soomaaliya noqotay ku simaha Madaxweynaha Dalka ka dib markii ay safaro kala duwan u ambabaxayn Madaxweynaha JFS iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saakay u safray dalka isugtaga Imaaraadka Carabta ka dib markii dhigiisa Dalkaas uu ka helay Martiqaad, inta uusan Madaxweynaha ka safrin garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde ayuu la kulmay Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Sacdiyo Yaasiin Xaaji. Tani ayaa imaaneysaa ka dib markii uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) uu shalay u safaray Dalka Kenya halka uu Madaxweynaha maanta u safray Dalka Imaaraadka carabta, sidaasne ay ku noqotay ku simaha Madaxweynaha Soomaaliya. Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar ayaa 28-kii April, 2022-ka loo doortay Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyada oo noqotay Taariikhda Soomaaliya Haweenaydii ugu horreysay ee ka mid noqota Guddoonka BFS. | dayniiile.com
Home WARKII Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Sacdiya Yaasiin...
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar ayaa markii ugu horeysay taariikhda dalka Soomaaliya noqotay ku simaha Madaxweynaha Dalka ka dib markii ay safaro kala duwan u ambabaxayn Madaxweynaha JFS iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saakay u safray dalka isugtaga Imaaraadka Carabta ka dib markii dhigiisa Dalkaas uu ka helay Martiqaad, inta uusan Madaxweynaha ka safrin garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde ayuu la kulmay Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Sacdiyo Yaasiin Xaaji. Tani ayaa imaaneysaa ka dib markii uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) uu shalay u safaray Dalka Kenya halka uu Madaxweynaha maanta u safray Dalka Imaaraadka carabta, sidaasne ay ku noqotay ku simaha Madaxweynaha Soomaaliya. Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar ayaa 28-kii April, 2022-ka loo doortay Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyada oo noqotay Taariikhda Soomaaliya Haweenaydii ugu horreysay ee ka mid noqota Guddoonka BFS.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar ayaa markii ugu horeysay taariikhda dalka Soomaaliya noqotay ku simaha Madaxweynaha Dalka ka dib markii ay safaro kala duwan u ambabaxayn Madaxweynaha JFS iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saakay u safray dalka isugtaga Imaaraadka Carabta ka dib markii dhigiisa Dalkaas uu ka helay Martiqaad, inta uusan Madaxweynaha ka safrin garoonka Diyaaradaha ee Aadan Cadde ayuu la kulmay Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Sacdiyo Yaasiin Xaaji.
Tani ayaa imaaneysaa ka dib markii uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) uu shalay u safaray Dalka Kenya halka uu Madaxweynaha maanta u safray Dalka Imaaraadka carabta, sidaasne ay ku noqotay ku simaha Madaxweynaha Soomaaliya.
Sacdiya Yaasiin Xaaji Samatar ayaa 28-kii April, 2022-ka loo doortay Guddoomiye ku xigeenka koowaad ee Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya iyada oo noqotay Taariikhda Soomaaliya Haweenaydii ugu horreysay ee ka mid noqota Guddoonka BFS.
Previous articleRoobab Khasaare Xoogan Geystay Oo Ka Da’ay Bangaladesh & Kumannaan Qof Oo La La’yahay
Next articleGuddiga KMG Maaliyadda oo Maanta kulan Ku yeesheen xarunta Aqalka Sare
War Dag Dag : Fahad Yaasiin oo dusha uga tuuray geerida...